Articles Archives - Page2of3- SOCH Nepal
आत्मासाक्षि राखि मन, वचन र कर्मले काम गरौँ भन्ने चोखो नारालिएर स्थापित समाज कल्याण परिषद् स्थापना गर्नु नेपालको सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र वृहत बनाउन आफैमा महत्वपुर्ण कदम हो । कमजोर र असहाय व्यक्ति र समुदायलाई सक्षम बनाउन संयोजनकारी भुमिका निर्वाह गर्न समाज कल्याण ऐन २०४९ मार्फत यो संस्था स्थापना गरिएको हो । समाज कल्याण परिषद्को अर्को मुख्य काम राज्यमा कल्याणकारी कार्य गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्ने हो । यति पवित्र उद्देश्यले स्थापित समाज कल्याण परिषद् व्यवहारमा [...]
17th January 2019 By soch Articles0Comments
Uttam Niraula धर्म शब्द र आमबुझाईः धर्म शब्दलाई विभिन्न प्रसंगमा आआफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्ने चलन छ । पूर्वीय दर्शनका ज्ञातासँग छलफल गर्दा धर्म शब्दको आ आफ्नै अर्थ लगाएको पाईन्छ । सर्वसाधारणलाई धर्म भनेको के हो भनेर सोध्दा यकिन उत्तर छैन । तसर्थ हाम्रो समाजिक परिवेशमा धर्म भन्ने शब्दबारे समान बुझाई छैन । धर्म भन्ने शब्दको अर्थ भ्रमपुर्ण बनाईएको छ । सोही धर्म शब्द जोडिएकाले धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द त्यसै भ्रमित छ । हाम्रो संविधानमा एकातर्फ राज्यलाई धर्म [...]
16th January 2019 By soch Articles0Comments
काठमाडौं, भदौ १÷सृजनामा मानववाद विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । मानववादी समाज (सोच) नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा साहित्यकार, पत्रकार, मानववादी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै साहित्यकार चन्द्रप्रसाद भट्टराईले बोलेको कुरा जसले सुन्छ त्यतिमै सिमिति हुन्छ । तर लेखेको कुरा लाखौं माझ पुग्ने भएकाले साहित्यकारले सकारात्मक र परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । लेखकले घटनालाई मात्र केन्द्र विन्दु बनाएर लेख्नु भन्दा समाजका राम्रा नराम्रा विषयमा जिम्मेवार भएर कलम चलाए परिवर्तन असम्भव नभएको बताउनुभयो । साहितयकार रामेश्वर जलनले [...]
8th January 2019 By soch Articles0Comments
पतिको रक्षार्थ तिजको व्रत ! अचम्म त मलाई त्यति बेला लाग्यो जुन बेला मेरो घर नजिकैको भाउजू एक्लै पर्नु भयो । दुईवटा स–साना नानीहरू भएकी ती भाउजू सधैँ घर नजिकैको मन्दीर जानु हुन्थ्यो । शनिवारको दिन शनि महाराजको व्रत, एकादशीमा भात नखाई व्रत, औंसी÷पूँर्णीमाको आफ्नै रीति थीति थियो उहाँको । मैले थाहा पाएसम्म उहाँले कुनै पनि वर्ष तिजको व्रत टुटाउनु भएन । एक दिन भाउजूलाई मेरी आमाले भन्नु भाथ्यो ‘किन औषधी खाइ–खाइ व्रत वसेकी ?’ त्यति बेला मलाई थाहा [...]
The right of all people to participate in the government of their society has beenafoundation of human freedom and happiness wherever it has existed. We are fortunate to live inaworld in which, through the efforts of humanists as well as religious believers, democracy is widely recognised as being the most just, rational, and effective form of governance available to humanity. Today, more people than ever before have the ability to shape the political direction of [...]
करिब १७ हजार जनताको ज्यान लिएपछि पहिलो जनसंविधान बन्यो । सो जनसंविधानले गाउँगाउँमा पुर्याएको सिंहदरबार अथवा स्थानीय तहको निर्वाचन गराए पछि देशको विकासमा कायापटल हुने धेरैको अनुमान र आश थियो । छ अझै बाँकी छ । अतः नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचित प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा आएको करिब ८ महिना भई सकेपछि स्थानीय तह कति सक्षम र कति असक्षम भए भन्ने लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ । विगतमा कर्मचारीले संचालन गरेको स्थानीय निकाय र हाल निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संचालन गरेको स्थानीय तहमा खासै [...]
शासकीय शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तअनुरुप एकै निकायलाई तीनै प्रकृतिको अधिकार दिइ“दैन । कानून बनाउने, शासन सञ्चालन गर्ने र न्यायिक निरुपण फरक–फरक निकाय वा अंगबाट संपादन हुन्छन् । कार्यकारिणीले शासन गर्छ, व्यवस्थापिका–संसदले कानून बनाउ“छ र न्यायालयले कानूनअनुरुप न्याय संपादन गर्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधान र कानूनमा स्थानीय सरकारलाई तिनै किसिमको अधिकार प्राप्त छ । स्थानीय सरकार, जसले आप्mना लागि आफैं कानुन बनाउन पाउ“छ । आप्mनो क्षेत्रभित्र शासन आफै गर्छ । त्यसअतिरिक्त मुद्दा–मामिला र झैं–झगडा पनि न्यायिक विधिबाट सल्टाउने गरी कानून अधिकार [...]
Nepalhas enteredavery crucial phase of its history with the proclamation ofaprogressive constitution withasecular character. Some of the thorny issues on which people have expressed their concerns include forms of the government such as traditional parliamentary system vs the directly elected prime ministerial or presidential forms of government, federalism (forms and the structure of the federalism) and the secular vsaHindu statehood and many other issues. It is not possible to discuss all [...]
4th January 2019 By soch Articles gopi upreti, Nepal, religion, secularism, sochnepal0Comments
प्राथमिक शिक्षा देखि नै विद्यार्थीलाई सिकाईन्छ किन चन्द्र ग्रहण वा सूर्य ग्रहण लाग्दछ भनेर । घुम्दै जाँदा सूर्यको किरणको सिधा रेखामा पृथ्वी र चन्द्रमा दुवै परेमा ग्रहण हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै छ । सूर्यको किरणलाई चन्द्रमाले छेकेर पृथ्वीमा अध्यारो भयो भने सूर्य ग्रहण र पृथ्वीले सूर्यको किरणलाई छेकेर चन्द्रमामा सूर्य किरण पुग्न सकेन भने त्यसलाई चन्द्र ग्रहण भनिन्छ । पृथ्वी र चन्द्रमा निरन्तर घुमिरहने भएकाले ग्रहण नियमित झै भई रहन्छ । यति सामान्य विज्ञानलाई समेत बुझ्न नसकेर हाम्रो समाज करिब [...]